I-Semalt ichaza iindlela zokukhusela iwebhusayithi yakho ye-WordPress kwi-Hackers
I-Intanethi inikezela kakhulu abantu abaninzi. Amashishini amaninzi athatha inthanethiiqonga lokutsala abaxhasi abaninzi kwiindawo ezahlukeneyo kwiwebhu. Ezinye zezi ndawo ziquka injini yokusesha usebenzisa i-Search EngineUkucwangcisa (i-SEO) okanye kumanethiwekhi asekuhlaleni usebenzisa iMicrosoft Marketing Marketing (SMM) - βιταμινη για μνημη.
I-akhawunti ye-WordPress malunga ne-24% ye-intanethi kwi-intanethi kwihlabathi. Baube neqonga le-intanethi elingenamntu apho wonke umntu angasebenzisa kwaye azuze. Iiplagi zabo, umakhi we-DIY kunye nezinye izinto zewebhu kwiikhowudi zabokunika iqonga elivulekileyo kubanini-shishini nabaninzi beeblogi ukuze bahlele i-e-commerce sites. Nangona kunjalo, abahlaseli bafika kulezi ndawo ngokufanayongendlela. Kukho iinzame ezingaphezu kwei-94563 zokuzama ukushaya iiWindowsPress nsuku zonke. Eli nani liza ngenxa yeqonga labo elivulekileyo elibonisazonke iindlela. Ngenxa yoko, i-WordPress ingabonisa isiqalo esingakhuselekanga esincinci abaninzi abanokuyisebenzisa ukuqhuba ezinye zezinto ezininzi ezinobungozihlaselwa.
u-Andrew Dyhan, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt ,ukhangele kwiingcebiso ozifunayo ukukhusela iwebhusayithi yakho ye-WordPress ekuhlaseleni.
Ukusebenzisa iiphasiwedi ezikhuselekileyo kubalulekile..Isiqhelo sokuqala sizama ukuzamaamaphasiwedi athathaka ngaphambi kokuba aqhube kwizinto ezinamandla. Iphasiwedi efana ne-12345 ayikho iphasiwedi ekhuselekile. Kwezinye iimeko, ungasebenzisi umlawuliiphasiwedi egama lomntwana okanye inkampani yakho. Unokushiya inkcazelo eninzi yenkampani, kwaye oku kungenza intanethi yonkeukhuseleko kwisimo esichengileyo. Ngaphezulu, khuthaza abathengi bakho ngokubaluleka kwezi meko.
Ukuhlaziywa kweefowuni kunye nesofthiwe ye-spyware
Ukugcina ikhompyutheni yakho kusesikhathini kunokukusindisa kwezinye zezinto ezintsha zokuhlaselwa kwewebhu. NgaphakathiUninzi lweziganeko, abahlaseli baqeshe ukusebenzisa ukusetyenziswa kwezixhobo ezinobungozi ezenza izikripthi kwisiphequluli sewebhu. Ngokomzekelo, abahlaseli bangasebenzisa iskripthi se-cross site. Okuukuxhaphaza ukuhlaselwa kumncedisi wewebhu ngokusebenzisa ukufaka imiyalelo kwiifom zokubhalisa okanye ezinye izithuba zokufakelwa kweetekisi. Ngenxa yoko, kubalulekile ukubaqwalasela ezinye ze-encryption njengoko idatha idlulela kuye nakwiseva kumsebenzisi wewebhu. Omnye umlinganiselo unokusebenzisa i-ware anti spy. Zeziiprogram ye-software ekwazi ukubona iintsholongwane kunye ne-malware njengeTrojans. Iwebhusayithi yakho inokuhlala ikhuselekile.
Kuyo yonke indlela yokuCommerce, kukho iindlela ezininzi zokufikelela kumncedisiI-intanethi isebenza ngendlela yokutshintshiselana, apho umsebenzisi ethuma kwaye ufumana imiyalelo evela kwisiphequluli. Ngokufanayo, abahlaseli basebenzisa eli thuba ukwenzaiiwebhusayithi zazo zithumela kwaye zifumana imiyalelo efumana ukufikelela kumncedisi ngokungekho mthethweni. Xa senza iiwebhsayithi, umsebenzisi kunye nokwaneliseka kwabathengingokuqhelekileyo umgomo wethu wokuphela. Asikwazanga ukuqwalasela amandla abobahlaseli kunye nabanye abantu abanenjongo yokugula. Eminye yeendlela ezilula ezenza umonakaloangasebenzisa ukungena kwiziko ledatha kufaka i-SQL Injection. Ukhuseleko lwamaziko onke luxhomekeke kwiindlela ezikhoyo ezinokubamba ubusela.Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela ezininzi abantu abazisebenzisayo ukufumana iziza zabo zikhuselekile kubadlali baqhankqalazi.